"Intombi yami yeba imoto yami" | News24
"Intombi yami yeba imoto yami"
Johannesburg - Ngesikhathi uBoy Molefe evumela intombi yakhe ukuthi ishayele imoto yakhe ukuze ezoya esibhedlela ngenyanga ephelile wayengazi ukuthi uyayigcina.
Le ndoda eneminyaka engu-34 ubudala wasePhooko eKatlehong eKurhuleni utshele abeDaily Sun ukuthi ngesikhathi egula intombi yakhe eneminyaka engu-21 ubudala, umama wayo nomfowabo bamuhambisa esibhedlela eThelle Mogoerane ngemoto yakhe yohlobo lwe-VW Polo emnyama kodwa abaphindanga bamulanda.
OLUNYE UDABA:'Intombi yebe isidumbu sesoka'
"Ngisola ukuthi yayicabanga ukuthi ngizoshona mase yona ithatha imoto yami. Ayikaze ize ingivakashele nokungivakashela," usho njalo.
UMolefe uthe isinqandamathe sakhe yiso ebesizothola konke okwakhe uma kukhona okwenzekayo kuye, yiso esibhaliwe emabhukwini ngopba ubehlose okuhle ngaso.
"Ngifuna abuyise imoto yami, iphutha engalenza ukumfundisa ukushayela.
"Sengakengazama ukuyithola kodwa akangiyazi ukuthi iphi. Sasijabulile sobabili kodwa manje ukumcabanga nje kkukukodwa kuyangigulisa kuvele kuthi xhufi inluziyo," usho njalo.
Ngesikhathi abeDaily Sun bexhumana nentombi kaMolefe ivele yababuza ukuthi akukho yini okuncgono abangakubhala waphinde wathi iphephandaba aliyeke ukuthanda izindaba zabantu wase esola intatheli ngokulala noMolefe.